Soomaaliya, 22 August 2019
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa Cumar Maxamuud Maxamed (Filish) u magacaabay inuu noqdo guddoomiyaha Gobolka Banaadir iyo Duqa Muqdisho, sida ku cad qoraal kasoo baxay Villa Somalia.
Axmed Maxamed Islaam ayaa dib loogu doortay madaxweynaha maamulka Jubaland, codeyn maanta ka dhacday magaalada Kismaayo, halka xildhibaannada is-beddel doonka ay iyagana madaxweynaha Jubaland u doorteen xildhibaan Cabdirashiid Xiddig.
Musharax Canadb oo ka hadashay doorashadii Jubaland
Bandhigga VOA: Doorka qurbo-joogta ee dhaqaalaha Somalia
Bayle oo ka hadlay xaaladda maaliyadda dalka
Dhaqanka iyo Hiddaha, Qeybta 483-aad
Jubaland oo xirtay xuduudaha Kismaayo
Dowladda Kenya ayaa sheegtay inay ka walaacsan tahay warqad uu 17-kii bishan soo saaray ergeyga xogahayaha guud ee QM ee Soomaaliya James Swan oo la xiriirtay doorashada madaxweynaha Jubaland.
Musharaxiinta Jubaland oo khudbado jeediyey
Afar musharax oo ka mid ah kuwa u taagan xilka madaxweynaha Jubaland ayaa maanta jeediyey khudbadahooda ay kusoo bandhigayaan qorshahooda siyaasadeed.
Daacishta Soomaaliya oo beegsaneysa Itoobiya
Kooxda Daacish ee Soomaaliya ayaa muuqaal ay soo duubtay ku muujisay inay dooneyso inay beegsato dalka Itoobiya.